Horudhac: Manchester United vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka FA Cup-ka ee caawa ka dhacaya Old Trafford) – Gool FM
(Manchester) 24 Jan 2021. Kaliya todobo maalmood kaddib markii ay wada ciyaareen kulank horyaalka Premier League oo ku dhammaaday barbaro goolal la’aan ah, kooxaha xafiiltanka weyn ka dhexeeyo ee Manchester United iyo Liverpool ayaa markale caawa isku wajahaya wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka.
Liverpool ayaa u safraysa garoonka Old Trafford iyadoo ku jirta abaartii ugu xumayd ee goolal la’aaneed muddo ku dhow 20 sano, halka kooxda martida loo yahay ay kor u duuleyso, haatanna waxay lix dhibcood ka sarreeyaan kooxda horyaalka difaacanaysa, iyagoo hoggaanka u haya haatan Premier League.
Labada kooxood ayaa caawa isku faro-saari doona garoonka Old Traffrod mid ka mid ah ayaana laga tuuri doonaa tareenka tartanka, halka kooxda kale ay iska xaadirin doontgo wareegga shanaad ee FA Cup-ka.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 08:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Victor Lindelof ayaa taam buuxa u noqon karo kooxdiisa Manchester United kulankan kaddib markii uu sababo la xiriira dhibaato dhanka dhabarka ah ku seegay kulankii ay guusha ka gaareen Fulham.
Marcus Rashford oo keydka la dhigay kulankii ugu dambeeyey ayay u badan tahay inuu ku soo bilaaban doono safka hore ee ciyaarta caawa.
Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa shaki la gelinayaa kulankan kaddib markii uu seegay ciyaartii ay guuldarrada kala kulmeen Burnley sababo la xiriira dhaawac muruqa ah.
Mohamed Salah iyo Roberto Firmino ayaa dib ugu soo laaban doona safka hore ee kulanka caawa kaddib markii ay ka soo muuqdeen kursiga keydka kulankii Khamiistii.
Joel Matip ayaa dhaawac dib uga soo laabtay waxaana uu wajahay Clarets kooxda lagu naynaaso laakiin uma badna in halis la gelin doono kulankan weyn, halka Kostas Tsimikas uu dib ugu soo laabtay loollanka.
>- Labada kooxood ayaa ku kulmay 17 jeer tartanka FA Cup-ka, waxaana ku jirta labo heer oo ay isku qabteen qarnigii 19-aad, markaasoo Manchester United la oran jiray Newton Heath.
>- Liverpool ayaa guuldarro kala kulantay sagaal jeer Man United tartanka FA Cup-ka, waana in ka badan koox kasta oo kale, waxaana kulammada kale ay kala qaateen 4 guul iyo 4 barbaro.
>- Kooxda Merseyside-ka guusha kaliya oo ay ka soo qaateen FA Cup inta ay booqdeen Machester United waxa ay ahayd 1921-kii, markaasoo ay soo guuleysteen wareegga koowaad kulan ku celis ahaa oo ku dhammaaday 2-1.
>- Waxa ay guuleysteen todobadoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkooda ku ciyaareen FA Cup-ka iyadoo aan gool laga dhalin.
>- Ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee inta soo booqda garoonka Old Trafford tartanka FA Cup-ka gool kaga dhaliya Man United waxa uu ahaa Dimitri Payet oo markaas metelayey West Ham United bishii Maarso ee sanadkii 2016-kii.
>- Man United ayaa guuldarro la kulmin wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka tan iyo guuldarradii 2-1 ee ka soo gaartay Liverpool sanadkii 2012-kii.
>- Kooxda 12-ka goor ku guuleysatay koobkan ayaa garaacday Swansea wareegii saddexaad ee sanadkii 2014-kii, laakiin tan iyo markaas waa ay gaari waayeen siddeed dhammaadka ama meel ka fiican lix xilli ciyaareed oo xiriir ah.
>- Dhammaan afarta guuldarro ee maxaliga ah oo Man United soo gaartay xilli ciyaareedkan waxa ay yimaadeen iyadoo ku ciyaareysay garoonkeeda Old Trafford.
>- Kooxda Merseyside-ka ka socota ayaa gaartay siddeed dhammaadka tartankan labo jeer tan iyo markii ugu dabeysay oo ay ku guuleysteen FA Cup-ka sanadkii 2006.
>- Waxa ay ku guuldarreysteen inay horumar ka sameeyaan oo ay ka gudbaan wareegga afaraad afar ka mid ah shantii xilli ciyaareed oo ay ka hoos ciyaarayeen tababare Jurgen Klopp.
>- Waxa ay gool dhaliyeen 15 ka mid ah 17-koodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda tartanka FA Cup-ka.